Ungayibuka Kanjani i-Hotstar e-USA? (Vulela noma ikuphi) - Ezokuzijabulisa
IHotstar yipulatifomu ebiza kakhulu enezinto ezahlukahlukene zokuzijabulisa. Ukuba nokwenzeka kwayo kuyenza ibe ‘eshibhile’ kunezinye eziningi izinhlelo zokusebenza zokusakaza ezinye izindlela e-USA. Njengamanje, iHotstar itholakala ngokusemthethweni eCanada, UK, India nase-Indonesia.
Kunezinhlobo ezahlukahlukene ze-Hotstar ezitholakalayo. Kukhona iDisney + Hotstar etholakala kuphela eNdiya nase-Indonesia. Okwamanje, i-Hotstar e-USA, e-UK nase-Canada ayinikezeli ngezinsizakalo zeDisney + ngayo. Kuyinto uhlelo lokusebenza oluzimele oluhlinzeka ngokuqukethwe okuthile kwe-Indian (Bollywood) okunelayisense yamazwe omhlaba.
Lokhu kukhawulelwa kungakudikibalisa ekusebenziseni ipulatifomu. Noma kunjalo, kunezindlela eziningi ongabuka ngazo i-Hotstar. Kule ndatshana, sizohlola lezi zindlela kusuka ezisemthethweni ziye kokungaphansi kokufanele kepha kusenokwenzeka.
Yini okufanele uyibuke ku-Hulu? Iqoqo Lokugcina
Umhlahlandlela wokubuka i-Hotstar e-USA:
Ungavakashela isikhulu iwebhusayithi ye-Hotstar ye-United States of America Version. Akukho okuqukethwe kwamahhala okutholakalela izethameli kulesi sifunda esithile. Ngaleyo ndlela, kuzofanele ufake uhlelo lokusebenza olusemthethweni bese ubhalisela uhlelo. Inqubo yokubhalisa ilula. Kunenqubomgomo yokubuyiselwa imali yezinsuku eziyisikhombisa uma kwenzeka ungazithandi izinsizakalo.
Uma ubhalisela i-Hotstar, ungasakaza amavidiyo amabili ngasikhathi esikahle ngaphakathi kohlelo lokusebenza kudivayisi eyodwa. IHotstar inikeza ukubhaliswa kwamadivayisi angafika kwanguhlanu, futhi. Kodwa-ke, ngokuya ngohlelo, ungabuka ngasikhathi sinye kumadivayisi afika kwamabili kuya kwamathathu ngasikhathi sinye.
Ukuhambisana kohlelo lokusebenza kukhawulelwe ngandlela thize kumadivayisi ahlakaniphile afana nama-smartphone, amathebulethi, nama-Smart TV. Awukwazi ukuyisebenzisa kwamanye ama-consoles, kepha kukhona inguqulo yesiphequluli etholakalayo yama-PC.
Le ndlela ilinganiselwe futhi ikunikeza ukufinyelela ku-Hotstar etholakalela izethameli zase-US. Uzoba nokufinyelela okunqunyelwe kokuqukethwe kwamaNdiya nezinye izinsizakalo zokusakaza. IHotstar ibiza ngentengo efanelekile kubabukeli baseMelika ngokuya ngokuqukethwe enikunikezayo. Noma kunjalo, ungazuza kangcono uma usebenzisa inguqulo yeDisney + Hotstar. Indlela yayo ishiwo ngezansi, ngemuva kwalesi sigaba.
Akunandaba, uma usafuna ukusebenzisa inguqulo esemthethweni ye-States, nazi izinyathelo:
Vakashela iwebhusayithi esemthethweni us.hotstar.com
Thola uhlelo lokusebenza bese ulilande
Njengoba kungekho okuqukethwe kwamahhala, lapho kwethulwa uhlelo lokusebenza, kuzokucela ukuthi ubhalise
Ungabhalisa, ubhalise futhi ungene ngemvume ukuze uqale ukusakaza okuqukethwe
Kuzofanele unikeze ngemininingwane yakho yokukhokha.
Uma unganelisekile ngokuqukethwe, kunesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku eziyi-7 ongasisebenzisa.
Ungayibuka Kanjani i-Hotstar On Firestick?
Kukhona uhlelo lokusebenza olusemthethweni lwe-Hotstar olutholakala esitolo sokudlala se-Amazon. Ungasebenzisa igama elingukhiye kufayela le- I-Firestick ukusesha isitolo sokudlala bese uthola uhlelo lokusebenza. Ungayilanda lapho bese uyisebenzisa njengensizakalo ejwayelekile yokusakaza.
Kodwa-ke, usadinga ukubhalisa, njenganoma iyiphi enye idivayisi, ukujabulela i-Hotstar ku-Firestick e-U.S.
Ungalanda Kanjani i-Hotstar?
Ungalanda i-Hotstar yedivayisi yakho esitolo sokudlala esifanele. Itholakala ku-Google, Apple, naku-Google Play Isitolo. Ngenye indlela, ungavakashela iwebhusayithi esemthethweni ukusakaza noma ukulanda uhlelo lokusebenza lapho. Konke lokhu kusadinga ukuthi ubhalisele iHotstar yokusakaza okuqukethwe.
Uma ufuna ukujabulela i-Indian HotStar, uzothola indlela eqinisekile yokudubula eshiwo ngezansi. Kusukela manje, ayikho i-Disney + Hotstar etholakala ngokusemthethweni e-USA. Ukubhaliswa kweDisney + Hulu kungahle kube yinkomishi yakho yetiye.
Ungayibuka Kanjani iDisney + Hotstar?
IHotstar yake yatholakala emhlabeni wonke, kuzo zonke izifunda. Manje iphinde yasebenzisa i-Geo-lock ne-Geo-limited ukuze ikhawulele ukutholakala kwayo nokufinyelela kokuqukethwe. Kunezinguqulo ezithile ezitholakala eCanada nase-United States. IDisney + Hotstar itholakala kuphela eNdiya nase-Indonesia.
Ngakho-ke, ukusebenzisa iDisney + Hotstar, kuzofanele usebenzise okuthembekile I-VPN (Inethiwekhi yangasese yangasese). Noma kunjalo, i-Hotstar isebenzisa isevisi evimba i-VPN, efana neNetflix. Akunakwenzeka ukuthi i-VPN yamahhala izokwazi ukudlula i-VPN-lock ye-Hotstar. Ngokufanayo, kuyingozi ukusebenzisa insiza yamahhala ye-VPN.
Iyiphi i-VPN ongayisebenzisela i-Disney + Hostar?
Ungasebenzisa anhlobonhlobo abahlinzeki bezinsizakalo ze-premium VPN abatholakala emakethe. Kukhona abathengisa iningi labo. Cishe bonke banikela ngamadivayisi amaningi (amahlanu noma ngaphezulu). Ngakho-ke, uma unemali encane, ungangena nomndeni wakho noma abangane ukuze ubhalisele i-VPN ebangeni eliphambili.
Abahlinzeki abaningi be-VPN banikela ngesilingo samahhala noma isiqinisekiso sokubuyiselwa imali ongasisebenzisa uma ufuna ama-VPN wamahhala. Isibonelo, i-ExpressVPN ize inikeze nohlelo lokudlulisela phambili. Uma ungathola umngani ukuthi ajoyine, wena nomngane wakho nizothola isivivinyo samahhala sezinsuku ezingama-30. Uma ungeza abangani abaningi, isikhathi sesilingo sizokwanda.
Okubhaliselwe ngeke kukusize ngokubuka iDisney + Hotstar kepha kukulethela ukuphepha kwe-VPN okugcwele nokungaziwa. Kungcono ukusakaza i-Disney + Hotstar nokunye okuqukethwe okukhawulelwe nezinhlelo zokusebenza ngaphandle kokulandela ngomkhondo.
Nakhu ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-VPN ukuze ubuke i-Disney + Hotstar:
Landa i-VPN ye-premium yedivayisi yakho
Bhalisela noma sebenzisa inguqulo yesilingo
Lapho ususebenze i-VPN, xhuma kuseva yaseNdiya
Iseva yamaNdiya ingcono kune-Indonesian yeDisney + Hotstar
Uma usuxhumeke kuseva yaseNdiya, vakashela iwebhusayithi esemthethweni ye-Hotstar.
Manje usungalanda uhlelo lokusebenza noma usakaze online
Uma usulanda uhlelo lokusebenza, ungalusebenzisa.
Izinzuzo Zokusebenzisa iDisney + Hotstar:
Kusuka kuseva yaseNdiya -
Kunezinzuzo eziningi zokusebenzisa iDisney + Hotstar ngaphezulu kweHotstar USA ejwayelekile okufanele ikunikeze. Okokuqala, imali yokubhalisa ishibhile kunguqulo ye-Indian. Ngaphandle kwalokho, nali ishadi lokuqhathanisa elisheshayo:
Ukusakazwa kwamahhala kwe-inthanethi kuyatholakala
Okuqukethwe kwe-India okukhethekile kuyatholakala
Ama-movie we-Bollywood nemibukiso
IDisney + iyatholakala
I-Marvel, i-Pstrong, ne-National Geography ifakiwe
Bukela ngesiHindi noma ngesiNgisi nangezinye izilimi
Iziteshi zaseNdiya nezamazwe omhlaba njenge-HBO, Star network, nokunye okuningi
Kusuka e-USA Server -
Dinga okubhaliselwe ukusakaza
Kukhawulelwe kokuqukethwe kwaseMelika
Okuqukethwe kwe-Bollywood okunamalayisense omhlaba kuphela okutholakalayo
Hhayi iDisney +
Akukho ukufinyelela okukhethekile kwi-Marvel, Pstrong, ne-National Geography
Isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku eziyi-7
Iziteshi ze-US kuphela
Njengoba wenza ukuqhathanisa, kuyacaca ukuthi iDisney + Hostar inguqulo ephezulu kuneHotstar. Manje, khumbula ukuthi isikhathi ngasinye lapho usebenzisa i-Disney + Hotstar, kuzofanele usebenzise i-VPN ukuze usakaze e-USA. Noma usebenzisa uhlelo oluhle kakhulu, kushibhile kunokubhaliselwe okujwayelekile kwe-Hotstar.
IHotstar uhlelo lokusebenza lokusakaza lwaseNdiya olutholakala emazweni akhawulelwe. Uma ufuna ngobuqotho ukuhlola ukuthi kungenzeka yini, ungcono ngokubhaliselwe kwe-VPN neDisney + Hotstar.Kodwa-ke, uma ukhathazekile ngezomthetho, akukho emthethweni ukusebenzisa i-VPN. Awukubhokile okuqukethwe nakho, ngoba usakhokhela okubhalisile.
Lezi zonke izindlela ongazisebenzisa ukusakaza iHotstar. Kulabo abangafuni ukusebenzisa iDisney + Hotstar kodwa banamathele enguqulweni yeHotstar USA, sebenzisa indlela esemthethweni.Ekugcineni, noma ngabe awufuni ukusakaza iDisney + Hotstar, uhlelo lokusebenza lukufanele ukutshalwa kwezimali. Ungomunye wabahlinzeki bezinsizakalo abashibhile e-United States onamanani entengo ancintisanayo ngenyanga nonyaka. Ungakuthola kufanelekile ukutshalwa kwemali nganoma iyiphi indlela.
Ungasithola Kanjani Isivivinyo Samahhala seDisney Plus?
Izinto Ezithokozisayo Okufanele Uzazi Nge-Queen's Gambit
Uyenza Kanjani I-Trailer Yegeyimu Emangalisayo Ezinyathelweni Eziyi-10 Ezilula!